Isahluko 50. Ukuthi Unalo Noma Awunalo Iqiniso Kunquma Konke | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngaphandle kwalabo abaphethwe omoya ababi, kungakhathaleki ukuthi luhlobo luni lomoya onalo ngaphakathi kuwe, imvelo yomuntu iyafana. Abanye abantu bahlala bezwa ukuthi, ngoba bakwazi ukwenza izinto ezithile, kufanele kube khona izinto ezingalungile ngomoya wabo; futhi kukhona labo okuthi, ngoba abakwazi nhlobo ukuguquka, nabo bezwa sengathi kufanele ukuba kukhona inkinga ngomoya wabo. Empeleni, noma ngabe kukhona inkinga ngomoya wabo noma cha, imvelo yomuntu iyafana—yedelela uNkulunkulu futhi ikhaphela uNkulunkulu, ngezinga eliqhathanisekayo lokukhohlakala, futhi lokhu nakho kuyafana nezinto ezijwayeleke emhlabeni wonke ezitholakala emvelweni yomuntu. Abanye abantu bavame ukusola ukuthi kukhona okungalungile ngomoya wabo, bethi, “Bengingakwenza kanjani lokhu? Angikaze ngicabange ukuthi ngingenza into enje. Ngabe kukhona into engalungile ngomoya wami?” Abanye abantu abaze bangayihlola imimoya yabo noma ngabe benzani. Kunalokho, bazihlola ngale ndlela, bethi: “Kungani ngenze lokhu ngale ndlela? Ikuphi imvelo yami kulokhu? Ngingakwenza kanjani lokhu esikhathini esizayo ngendlela evumelana neqiniso?” Indlela abantu abazihlola ngayo nendlela abazihlola kuyo kwehlukene. Abanye abantu bafuna iqiniso, futhi abanye bafaka onke amandla abo ezimweni eziphambene. Kufanele uqonde manje ukuthi, kungakhathaleki ukuthi umuntu unaluhlobo luni lomoya, akekho okwazi ukuthinta noma ukubona izinto ezingaphakathi komoya. Kufanele kunakwe ngokusemqoka ukuthi imvelo yakho iyini nokuthi yiziphi izinto ezikhona ngaphakathi kwemvelo yakho; izinto ezambulwayo lapho wenza lokhu zifakazela ukuthi yiluphi uhlobo lwemvelo onalo futhi ukuthi yiluphi uhlobo lwemvelo oluyinto yengqikithi; izinto ezembulwayo azifakazeli ukuthi iluphi uhlobo lomoya onalo.
Lapho isintu sikhohlakaliswa nguSathane, imvelo yaso yafana. Wonke umuntu wavela kukhokho oyedwa, bonke baphila emhlabeni owodwa, bonke bedlule ekukhohlakaleni okufanayo, futhi banezinto ezifanayo ezijwayelekile. Nokho, abanye abantu bayakwazi ukwenza uhlobo olulodwa lwento esimweni esisodwa, futhi abanye abantu bakwazi ukwenza olunye uhlobo lwento kwesinye isimo; abanye abantu banolwazi oluthile lwamasiko, ngenxa yokufunda, futhi abanye abanalo ulwazi lwamasiko, ngenxa yokungafundi; abanye abantu banohlobo olulodwa lokubuka izinto, abanye banolunye uhlobo lokubuka izinto; abanye baphila ohlotsheni olulodwa lwesimo sokuhlalisana, futhi abanye baphila kolunye uhlobo lwesimo sokuhlalisana, futhi banamasiko ehlukene nemikhuba yokuphila abakuthole kwababandulele. Ingqikithi yezinto ezembulwa ngaphakathi kwemvelo yomuntu, nokho, iyafana. Ngakho akukho sidingo sokuthi ubuye uzikhathaze ngokuthi unaluphi uhlobo lomoya. Lokhu kuyinto umuntu angeke akwazi ukufinyelela kuyo; uNkulunkulu kuphela ongakwazi lokhu, futhi ngeke kumsize umuntu ukuthi akwazi. Ukuhlala ufuna ukuhlaziya umoya noma ukuzindla ngomoya akuhlomulisi ngalutho. Lokhu yinto eyenziwa ngabantu abangazi kakhulu, abadideke kakhulu emakhanda. Ungenzi into engalungile noma wone ngandlela thize bese uzingabaza, uthi: “Ngabe kukhona into engalungile ngomoya wami? Ngabe ngiwumoya omubi? Ngabe umoya wami awufani nokujwayelekile? Kungani ngihlala ngenza lokhu?” Kungakhathaleki ukuthi wenzani, kufanele ubheke imvelo yakho ukuthola impande yenkinga, bese ufuna amaqiniso okufanele ungene kuwo. Uma uhlola umoya wakho, khona-ke ngeke uthole lutho—noma ufinyelela ekwazini ukuthi unaluphi uhlobo lomoya ngaphakathi, uyobe usalokhu ungakwazi ukwazi imvelo yakho, noma ukwazi ukuxazulula izinkinga zakho. Ngakho, abanye abantu bahlala bekhuluma ngokuthi banaluphi uhlobo lomoya ngokungathi banomoya ngokuphakeme kakhulu, ngokungathi bangongcweti ngokuphakeme kakhulu, lapho empeleni bephansi ngokwengeziwe, futhi banobuwula obengeziwe. Abanye abantu bakhuluma ngokomoya okukhethekile, bezwa ukuthi amazwi abawakhulumayo makhulu, nokuthi abantu abajwayelekile ngeke bawaqonde. Basho izinto ezifana nalokhu, “Kubaluleke kakhulu ukuthi sihlole ukuthi imimoya yethu iyini. Uma singenayo imimoya yabantu, khona-ke ngisho sikholwa kuNkulunkulu, ngeke sikwazi ukusindiswa nguNkulunkulu. Akufanele senze uNkulunkulu akhathale yithi.” Ngakho-ke abanye abantu bangenwa ubuthi, futhi bezwa ngokujulile ukuthi lokho okushiwo kubo kunomqondo, bese bethi, “Uqinisile. Ngizohlola ukuthi nginaluphi uhlobo lomoya.” Ngoba banaka umoya kakhulu kangaka, bagcina sekungathi bagula ngokomqondo, behlola umoya wabo njalo uma benza into, futhi ekugcineni bathola inkinga, bethi: “Kungani ngiphambana neqiniso kukho konke engikwenzayo? Kungani ngingenaso nesicucu somqondo wobuntu? Kusho ukuthi ngiwumoya omubi.” Empeleni, ngemvelo embi nokungabi neqiniso, umuntu angayenza kanjani into elungile? Noma ngabe zibonakala zilunge kangakanani izinto abazenzayo ngaphandle, basaphambene neqiniso futhi basenobutha noNkulunkulu. Imvelo yomuntu imbi futhi ikhohlakaliswe uSathane yaguqulwa nguSathane; akanakho nhlobo ukufana nomuntu, uvukela uNkulunkulu ngokuphelele futhi uyamdelela, ukude kakhulu noNkulunkulu ngendlela yokuthi akakwazi nhlobo ukwenza noma yini ehambisana nentando kaNkulunkulu, futhi ngaphakathi kwemvelo yokuzalwa yomuntu akukho okuhambisana noNkulunkulu. Lokho konke kusobala. Abanye abantu banokugula ngengqondo kakhulu, bethi, “Kungani ngihlala ngenza izinto ngokungalungile? Kungani ngihlala ngenza izinto zokungazi, ngihlala ngenza izinto ezihlekisayo neziyihlazo? Akukhona ngoba kukhona into engalungile ngomoya wami?” Babona izindaba zomoya njengezibaluleke ngokungakholakali kakhulu bese bebeka indaba yemvelo yabo eceleni. Lokhu kubizwa ngokuthi “Ukuhlakanipha ezintweni ezincane nobuwula ezintweni ezinkulu”; kungukudedela izindaba zangempela uzibeke eceleni, nokubambelela ezintweni ezingenalutho, ezinokuzikhohlisa. Akubona ubuwula lobu? Ngabe uzindle ngezinto zomoya iminyaka eminingi, ngakho uziqonde ngokuphelele? Ngabe uziqonde ngokuphelele izindaba zomphefumulo? Ngabe ubonile ukuthi yiluphi uhlobo lomoya onalo ngaphakathi kuwe? Awuvumbululi izinto zemvelo yakho ezingaphakathi ekujuleni komphefumulo wakho, uzama kuphela ukuvumbulula ukuthi yiluphi uhlobo lomoya onalo. Kodwa uyakwazi yini ukulukhipha futhi ulubuke? Ngabe lokhu akufani nempumputhe ikhanyisa ikhandlela ichitha ingcino yalo ngokungenanzuzo? Ubeka eceleni izinkinga zakho zangempela futhi awucabangi ukuthi zingaxazululwa kanjani, uhlala uthatha indlela engalungile futhi uhlala uzindla ngokuthi unaluphi uhlobo lomoya, kodwa lokhu kungakwazi ukuxazulula noma iyiphi inkinga? Uyayekelela emsebenzini wakho ekukholweni kuNkulunkulu ngokuhlala uzindla ngomoya wakho, futhi ufana nje nomuntu onokugula ngengqondo.
Isimo somqondo esithathwa ngabahlakaniphe ngempela sithi: “Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani noma ungiphatha kanjani, kungakhathaleki ukuthi ngikhohlakele ngokujule kangakanani noma bunjani ubuntu bami, kufanele ngingaphambuki ekuzimiseleni kwami kokufuna iqiniso nokufuna ukwazi uNkulunkulu.” Lokhu yilapho impilo yomuntu iqonde khona, yilokho okufanele umuntu ngabe ufuna ukukuthola, futhi iyona yodwa newukuphela kwendlela eya ensindisweni. Manje, ukufuna iqiniso kuyinto ekhona, ukwazi imvelo yakho ekhohlakele kuyinto ekhona, nokwazi ukwanelisa uNkulunkulu kuyinto ekhona. Akunamsebenzi ukuzindla ngalezo zinto ezingenakuthintwa noma zibonwe. Manje uphila enyameni, ngakho kufanele ufune lezo zinto okwazi ukuzithola. Ukuze unqume ukuthi umuntu uphethwe imimoya emibi, kufanele ubheke ukuthi unesimo sengqondo esijwayelekile noma cha lapho enza izinto. Uma engenaso, khona-ke ngeke asindiswe. Ngokujwayelekile, manje unomqondo ojwayeleke ngokukhethekile, ukhuluma ngokwejwayelekile, futhi akwenzeki sigameko esingaphezu kwesemvelo noma esingajwayelekile kuwe. Noma kwezinye izikhathi uzwa izimo ezithile ezingejwayelekile, zingukuziveza kwemvelo yakho, njengoba kunjalo ngezindlela ezingalungile zokwenza izinto. Empeleni, awehlukile kwabanye, yisimo nesikhathi sokuveza kwakho kuphela okwehlukile. Kuwukukholwa okuyiphutha kuwe ukuthi ucabange ukuthi abanye abantu bonke babonakala belungile. Kusengathi izimo zenu zangokomoya zivuthiwe kancane futhi, ekuthintaneni nezindaba ezithile zomoya noma izisho ezimayelana nomoya, ekugcineni niphendukela ekuzihlaziyeni, kusengathi ningabantu ababaluleke kakhulu. Odokotela besayensi yezindaba zenkolo abaziqondi izindaba zomoya; nguNkulunkulu kuphela ozaziyo futhi oziqondayo, ngakho umuntu angabona kanjani phakathi kwazo? Akulula yini kumuntu ukuthi aduke? Abantu kulezi zinsuku bonke banalesi simo ngaphakathi kwabo. Noma ngabe awuzixoxi ngobuqotho njalo lezi zindaba, futhi ungase ungabi buthakathaka noma uwe ngenxa yazo, usengathinteka okwesikhashana yilawo mazwi abanye. Nakuba ungeke ulunake kakhulu lolu daba, usenalezo zinto ngaphakathi kuwe, futhi luyafika usuku lapho wenza izinto kabi ngokoqobo futhi, lapho wehlelwa yinkinga noma uwa, ube usuqala ukuzingabaza, uthi: “Kungenzeka ukuthi kukhona okungalungile ngomoya wami futhi?” Ngokujwayelekile, awubonakali unokungabaza, futhi lapho ubona abanye bebishe ekungabazeni ucabanga ukuthi abasile kanjani. Uma kufika usuku lapho kubhekanwa nawe, noma omunye umuntu ethi unguSathane, noma ungumoya omubi, khona-ke uyokukholwa lokho, futhi njengabo nje uyobisha ekungabazeni futhi ngeke ukwazi ukuzikhipha. Empeleni, abantu abaningi bayangenwa yilokhu kugula, ukubona izindaba zomoya njengezibaluleke ngokumangazayo nokubeka udaba lwemvelo yabo eceleni. Lokhu kubenza behlukane ngokugcwele nokungokoqobo futhi kuwukuphambuka kulokhu umuntu ahlangene nakho. Kufanele nonke ninake ukwazi ukuthi yiziphi izingxenye zemvelo yenu engenza ukuthi nenze izinto ezingalungile noma niduke, futhi kufanele, ngenxa yalokhu, niqoqe okwedlulwe kukho kanye nezifundo. Ikakhulu mayelana nokusebenza, mayelana nohlangene nakho namayelana nokwazi imvelo yakho, kufanele uye ngokuya ufinyelela ekubeni nolwazi oluphakeme ngalezi zinto, futhi kulapho kuphela oyokwazi khona ukubamba izimo zakho futhi ukhule uqonde endleleni elungile. Uma ukwazi ukuba nalezi zingxenye zeqiniso futhi uzenze zibe yimpilo yakho yangaphakathi, khona-ke uyozinza ngokwengezwe kakhulu, ngeke usenza izinkulumo ezingafanele ngezinto ongaziqondi, uyokhuluma uqonde ephuzwini, futhi uyohlanganyela ngezinto zangempela. Lapho abantu bezuza ulwazi lwemvelo yabo olujule kakhudlwana nokuqonda iqiniso ngokujule kakhudlwana, bayobe sebekhuluma ngokwengeziwe ngomqondo ofanelekile, futhi ngeke besakhuluma ngokunganaki. Labo abangenalo iqiniso bavame ukuba nemiqondo engazikile, futhi bayalokotha basho noma yini; futhi kukhona abantu abathi, lapho besabalalisa ivangeli, ngenhloso yokuphendula abanye abantu abambalwa baze bangabi nakungabaza ngokubhekana nomphumela wokuhlambalaza uNkulunkulu njengendlela yokuzuza laba bantu. Abanamqondo wokuthi bona uqobo bayini, abazazi izimvelo zabo, futhi abamesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bakholwa ukuthi akuyona into enkulu, kodwa empeleni akuyona into enkulu? Lapho kufika usuku lapho bebona khona ubucayi benkinga, bayokwesaba. Kwaze kwaba yinto embi ukwenza kwabo lokhu! Abakwazi ukubona phakathi engqikithini yale ndaba, futhi baze bazicabange behlakaniphe kakhulu nokuthi baqonda yonke into; kodwa ababoni ukuthi bacasula uNkulunkulu futhi ababoni ukuthi bazobhubha kanjani. Akunamsebenzi ukuthi ubone phakathi kwazo zonke izindaba ezimayelana nesihogo noma umhlaba wokomoya uma ungayazi imvelo yakho.
Okubalulekile manje ukuxazulula izinkinga zemvelo yomuntu. Kufanele ubambe zonke izimo ezembulwa yimvelo—uma ungakwazi ukukwenza lokhu, khona-ke konke okunye ukuqonda akunamsebenzi; uma ungakwazi ukwenza lokhu, khona-ke noma ungazihlaziya kangakanani ukuze ubone uhlobo lomoya onalo noma ukuthi yiluphi uhlobo lomphefumulo onalo, konke akunamsebenzi. Kubalulekile ukuthi ubambe zonke izinto ezehlukene ezikhona ngempela emvelweni yakho. Manje, kungakhathaleki ukuthi unohlobo luni lomoya ngaphakathi kwakho, ungumuntu manje, unemicabango futhi unengqondo ejwayelekile, ngakho kufanele uqonde iqiniso futhi wamukele iqiniso. Uma ukwazi ukuqonda iqiniso, khona-ke kufanele wenze ngokuhambisana neqiniso—lona ngumsebenzi womuntu. Ukuzindla ngezindaba zomoya akunalusizo nhlobo kuwe. Labo abanemimoya emibi asebevele bedaluliwe baba nezikhathi ezimbalwa zokuba ngabejwayelekile, futhi bazoliqonda uma uhlanganyela iqiniso nabo, futhi ngezinye izikhathi bazokwazi futhi ukuba nokuhlangenwe nakho okuncane. Lokhu akunjalo, nokho, ngalabo abanomqondo ongejwayelekile futhi abaphethwe ngamadimoni ngokuphelele. Ngaphandle kwabo, mayelana nalabo ngokwejwayelekile abanomqondo ojwayelekile, noma ngabe banaluphi uhlobo lomoya ngaphakathi kubo noma izinga labo lemfundo, uma nje benokuqonda izindaba zomoya, khona-ke bayakwazi ukuqonda iqiniso, futhi lokho kwanele. Nakuba umuntu engenawo amandla okwamukela iqiniso, usengalithatha, futhi ukucabanga kwakhe kusasebenza mayelana nengxenye yemfundiso yeqiniso. Lokhu kuyinto abakwaziyo ukuyithola. Ngakho-ke akudingekile ukuba uzindle ngokuthi yiluphi uhlobo lomoya onalo. Akudingekile manje ukuqonda noma ukubamba ukuthi unaluphi uhlobo lomoya, ukuthi umoya wakho ungalemukela yini iqiniso noma umoya wakho ukholwa kuNkulunkulu noma cha—lokhu akusimqoka. Okumqoka ukuthi wena uqobo ungalemukela yini iqiniso, ukuthi manje ungumuntu ofuna iqiniso noma cha, ukuthi ungumuntu okwazi ukubamba izimo zakhe noma cha, nokuthi ungumuntu oyaziyo yini imvelo yakhe noma cha—lolu wudaba olubaluleke kakhulu. Akubalulekile ukuzindla ngokuthi yiluphi uhlobo lomoya onalo, futhi kuze kube nokubaluleka okuncane ngokwengeziwe. Uma uhlala uzindla ngokuthi unaluphi uhlobo lomoya, uhlala uzindla ngokuthi sinjani isimo somphefumulo wakho, okwenziwa umoya wakho, ukuthi siyoba yini isiphetho somoya wakho, noma ukuthi kuyokwenzekani kuwo esikhathini esizayo, khona-ke ukuzindla ngalezi zinto kuyophazamisa izindaba ezibalulekile. Ngisho ngabe uzindla ngalolu daba uze uluqonde ngokugcwele, lapho lufika usuku lapho wonke omunye umuntu eqonda iqiniso futhi engena kokwangempela, khona-ke uyobe usuzibambezele futhi uyobe usuzivalele; lokhu kusho ukuthi uyobe sewudukile, konke ukukholwa kwakho kuNkulunkulu kuyobe kube yize futhi uyobe ungazuzanga lutho. Lapho leso sikhathi sifika, uyogxeka bani?
Okwedlule：Isahluko 47. Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu
Okulandelayo：ISahluko 53. Ukuqonda Ukufana Nomehluko Emvelweni Yomuntu
Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu Isahluko 6 Isahluko 29